शब्दकोश: नयाँ वर्ष ! मङ्गल होस् !!
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, December 31, 2008
Basanta Gautam December 31, 2008
यस ब्लगका सर्जकहरु र सबै पाठकहरुमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
Dilip Acharya December 31, 2008
दीपक जडित December 31, 2008
जे सुकै भनौं या जसरी नै सोचौं यो यौटा मौका हो शुभकामना बाँडीचुँडी गर्ने अत मंगलमय शुभकामना छ तपाईंलाई नयाँ वर्ष सन् २००९ को ।
कैलाश January 01, 2009
शुभ काममा ढिला नहुनु भन्छन् तर पनि यो लोडसेडिङको कमाल हो-प्रमुख कुरा यो नेपाल हो । हुन त खासै ढिला भएको छैन । जे होस् नयाँ वर्ष सन् २००९ को मंगलमय शुभकामना छ है धाइवा जी अनि क्याफेका सम्पूर्ण सारथीहरुलाई।
साह्रै व्यस्त हुनुभयो क्यारा हगि ? देखभेट हुने साइत जुर्न छाड्यो।
बिमल गिरी January 01, 2009
सर्ब प्रथम त नयाँ बर्ष २००९ को
पुनित अबसरमा शुभकामना।
नयाँ कामका थालनिहरु को शुरुवात होस्
यो नयाँ बर्षमा। पुन शुभकामना।
DEEPENDRA January 01, 2009
एकल यात्री January 01, 2009
Like the heaven above.......
TO all blog followers.
Jotare Dhaiba January 02, 2009
सबै हितैषी एवम् शुभेच्छुक प्रिय मित्रहरुलाई शुभ कामना अर्पणको लागि आभार सहित हार्दिक कामना चढाउँछु ।
दिपेन्द्रजी र विमलजीसँग पनि आगमी यात्रामा हातेमालो रहने नै छ । कैलाशजी, समयको भारी बोक्दा कहिलेकाहीँ यस्तै हो, होइन र ? र पनि आफुलाई संयोजन गर्दैछु । तपाईंलाई वीरसना कहाँ सक्ने छु र ? अब भेट हुनेछ ।
उजेली January 02, 2009
ढिलै भएपनि नयाँ वर्षको धेरै शुभकामना सबैजनालाई !!
सिकारु January 03, 2009
happy new year 2009 dhilai bhaepani..
Avinashi January 03, 2009
Happy New year..to u ..and to all
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) January 03, 2009
म पनी तपाईको कुरामा सहमत छू र भनी हालुम न त ! पहिला समयको मंगल होस अनि त्यसको राप ले तपाई हामी सबैको मंगलम होला नि त - सबै भन्दा त 'CaFe मंगलम' को मंगल होस । धन्यबादम !
Jotare Dhaiba January 04, 2009
पछिल्ला चार मित्रहरु उजेलीजी, अविनाशीजी,सिकारुजी र वेदनाथजी सबैलाई क्याफेको तर्फबाट आभार एवम् हार्दिक मंगलमय कामना !
शुभ कुरामा केको ढिलाई होइन र उजेलीजी ?
वेदनाथजीको यस गहिरो मंगल भाकाप्रती नतमस्तक छु । तपाईंको साहित्य यात्रा पनि मगमगाइरहोस् ।